अफगानिस्तानमा लगातार दोस्रो दिन फेरि भूकम्प ! – Dcnepal
अफगानिस्तानमा लगातार दोस्रो दिन फेरि भूकम्प !
प्रकाशित : २०७९ असार ९ गते १३:२०
काठमाडौं । अफगानिस्तानमा लगातार दोस्रो दिन भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । अफगानिस्तानका केही क्षेत्रमा बिहीबार बिहान ४.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । यद्यपी यसबाट हालसम्म कुनै पनि जनधनको क्षति भएको छैन ।
करिब ४ करोड वर्ष पहिले भारतीय उपमहाद्वीप युरेशियन प्लेटसँग ठोक्किएको थियो । जसका कारण हिमालय पर्वत बनेको हो । आज पनि यो हिमाल हरेक वर्ष एक सेन्टिमिटर अग्लो हुँदै गएको छ । यही तनावका कारण यहाँ प्रायः भूकम्प जान्छ ।
यसबाहेक, लगातार टक्करका कारण, तहहरूको दबाब वहन गर्ने क्षमता समाप्त हुन्छ। तहहरू भाँचिएपछि, तिनीहरूको मुनिको ऊर्जाले बाटो खोज्छ। जसका कारण हिमाली क्षेत्रमा भूकम्प जान्छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल र उत्तर भारतको केही भाग हिमालय पर्वतमालामा पर्छ। जसका कारण यहाँ सधैं भूकम्पको जोखिम रहन्छ ।
हरेक वर्ष संसारमा धेरै भूकम्प आउँछन् तर तिनीहरुको तीव्रता कम हुन्छ। राष्ट्रिय भूकम्प सूचना केन्द्रले प्रत्येक वर्ष करिब २०,००० भूकम्पहरू रेकर्ड गर्दछ, जसमध्ये १०० भूकम्पले क्षति पुर्‍याउँछ। भूकम्प केही सेकेन्ड वा केही मिनेटको लागि रहन्छ, तर इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्ने भूकम्प २००४ मा हिन्द महासागरमा भयो। यो भूकम्प १० मिनेटसम्म चलेको थियो ।
बुधबारको भूकम्पलाई ध्यानमा राख्दै ताबिबानले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । सरकारी प्रवक्ताका अनुसार भूकम्पबाट प्रभावितलाई सहयोग गर्नुका साथै सबै आपतकालीन संस्थाहरूलाई उद्धार टोली पठाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।